မြတ်စွာဘုရားကို ဘာ့ကြောင့် ရှိခိုးရပါသလဲ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြတ်စွာဘုရားကို ဘာ့ကြောင့် ရှိခိုးရပါသလဲ။
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Sep 7, 2011 in Copy/Paste |2comments
” မိမိတို့ မစောင့်ထိန်းနိုင်တဲ့ အကျင့်သီလများကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်တာကြောင့်” ???
– Why do you think, other people cannot keep “စောင့်ထိန်းလိုက်နာ ကျင့်သုံး” your “အကျင့်သီလများ” ???
– May be, they can keep “စောင့်ထိန်းလိုက်နာ ကျင့်သုံး” this “အကျင့်သီလများ” better than you
– May be, they don’t believe the result, that’s why, they don’t want to kept this fasting.
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ ရဲ့တရားအတိုင်းပြောကြည့်ရင်.. အမှား အမှန်၊ အကောင်း အဆိုး၊ အကြောင်း အကျိုးကို ခွဲခြားသိအောင် ညွှန်ပြ ဆုံးမနိုင်သော ဗုဒ္ဒ ဖြစ်သောကြောင့် ရှိခိုးထိုက်ပါသည်။